Tsy isan’ireo hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany hatao any Szeged (Hongrie) i Madagasikara na dia efa niomana nandritra ny enim-bolana aza.
Efa voaloa ny Visa sy ny Fiantohana tsy azo averina intsony, izay mitotaly 2 600 000 ariary. Mbola mila vola mitentina 28 tapitrisa ariary ny federasiona handoavana ny « accomodation » sy ny fiantranoana ary ny saram-pandraisana anjara amin’ny fifaninanana.
Raha ny nambaran’i Faly Razanamparany, Tale jeneralin’ny Fanatanjahantena, dia « Efa niantoka tapakila valo amin’ny 10 minisitera ho an’ity delegasona ity ». Nijanona teo anefa ny fanampiana avy tamin’io rafitra mpiahy ny fanatanjahantena malagasy io.
« Tamin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika natao tany Libreville (Gabon) dia niantoka manontolo ny minisitera teo aloha. Teto dia saran-dalana tapany no niantohan’izy ireo satria mbola misy sidina adiny roa miala eo Budapest mankany Szeged, izay handray ny fifaninanana.
Miendrika fanomezana misy poizina ihany satria tsy tonga any amin’ny toerana tokony haleha », hoy i Briand Andrianirina, filohan’ny federasiona malagasin’ny Kickboxing. Tomany sisa no tsy nataon’ireo atleta saika handrafitra ny delegasiona tamin’ity.
« Efa ela no nalefa tany amin’ny minisitera ny fangatahana nataonay ary efa nanaiky izy ireo. Taty aoriana anefa dia somary nihalangalana indray izy ireo », hoy ihany ny filohan’ny federasiona malagasin’ny kickboxing. Nomarihiny fa federasiona vao miarindoha ny kickboxing, saingy efa nitondra avo ny voninahitr’i Madagasikara teo amin’ny sehatra avo lenta.